BBC Somali - Warar - MSF: Qaxooti looma celin karo Soomaaliya
MSF: Qaxooti looma celin karo Soomaaliya
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 2 Oktoobar, 2012, 10:31 GMT 13:31 SGA
Kenya ayaa codsatay in dib loo celiyo qaxootiga Soomaaliyeed
Hay'adda MSF ee ka howl-gasho xeryaha qaxootiga ee woqooyi-bari Kenya ayaa sheegtay in aanay suura-gal ahayn in qaxootiga loo celiyo dalka Soomaaliya.
Dowladda Kenya ayaa horey u codsatay in qaxootiga la geeyo goobaha ay ciidankooda ka qabsadeen ururka Al-Shabaab.
Dad kor u dhaafayo 500,000 oo ruux oo Soomaali u badan ayaa ku sugan xeryaha qaxotiga ee Dhadhaab.
Kenya ayaa waxay doonaysaa in dadkani gar-gaar loogu geeyo goobaha ay tilmaameen in ay xasilooni ka jirto.
Hay'ada MSF ayaa ku tilmaantay dalabkani Kenya mid "lagu dag-dagay".
Madaxda Hay'adda MSF ee Kenya, Dr Elena Velilla, ayaa ka digtay in qaxootiga hadii la celiyo la geyn doono xeryaha dadka barakacayaasha. Waxay sheegtay in noolosha xeryahaasi ay tahay mid aad u liidato.